१ घर १ धारा, पानी लिन जानु पर्दैन टाढा… — Sanchar Kendra
मुगु । जिल्लाकाे सोरु गाउँपालिका वडा नं. ८ आसिधारामा खानेपानीको आयोजना पुरा भएपछि स्थानीयको जनजीवन सहज भएको छ । नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अनुकुलन कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्र, मुगुको संयुक्त साझेदारीमा संचालित क्याप्mस कर्णाली परियोजना अन्तर्गत खानेपानी आयोजना पुरा भएपछि सबैको घरघरमा खानेपानीको धारा पुगेको हो । पानी धारा घरमै पुगेपछि स्थानीयको दैनिकीमा समेत परिवर्तन आएको छ । जसले गर्दा स्थानीयमा खशी छाएको छ ।
जलवायु परिवर्तन तथा खाद्य सुरक्षाका दृष्टीले अति संकटासन्न सोरु गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित आसिधाराका स्थानीयले लामो समय देखि पानीको अभाव झेल्दै आएका थिए । गत वर्षको बाढीले बस्तीको खानेपानीको भौतिक संरचनालाई पुर्ण रुपमा क्षति पु¥याएको थियो । गाउँमा १ वटा मात्र धारा भएको र उक्त धारामा निरन्तर पानी नआउदा स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएका थिए । बस्ती माथि खोलामा पानीको मुहान भएपनि पानीको हाहाकार भएकोमा पछिल्लो समय आयोजना पुरा भएपछि स्थानीयको दैनिकी फेरीएको छ । स्थानीयको श्रम क्याम्पस कर्णाली परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा आयोजना पुरा भएपछि स्थानीयलाई राहत भएको हो ।
१ गाग्री पानीका लागि महिलाले सबेरै पानीको धारामा लाईन बस्नुपर्ने र धारामा पानी नआएमा पानीको मुहान धाउनुपर्दथ्यो । तर गाउँमा खानेपानी आयोजना पुरा भएपछि त्यो दुःख हटेको छ । गाउँमै पानीको धारा आएपछि विशेष गरि गर्भवती महिला तथा बालबालिकालाई राहत मिलेको स्थानीय हरिनन्दा रोकायले बनाईन ।
गाउँमा पानी पुगेपछि पिउनका लागि मात्रै नभई स्थानीयको सरसफाईको क्षेत्रमा समेत निकै परिवर्तन आएको र आफ्नो घरको करेसाबारीमा समेत तरकारी खेती गर्न थालेको खानोपानी आयोजना समितिका अध्यक्ष जुवारी लाल खड्काले बताए ।
वस्ती माथि रहेको खोलामा मुहानको पानी १३ सय मिटर पाईप लाईन बाट करिव ८ घनमिटर क्षमताको टंकीमा जम्मा गरी पाईपलाईनको माध्यमबाट बस्तीमा पानी पुगेको छ । गाउँमा रहेका २७ घरधुरीमा पानीको धारा पुगेको हो । आयोजनमा क्याम्पस कर्णाली परियोजनाको तर्फबाट २४ लाख ६८ हजार रुपैया कुल लागत रहेको थियो ।
आयोजना पुरा भएपछि गाउँको पानीको हाहाकार अन्त्य हुनुका साथै दैनिकीमा समेत सुधार आएको छ । आयोजनामा वस्तीका संकटासन्न स्तर क र ख का जम्मा २४ जनाले अल्पकालिन रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । आयोजनामा आफुले काम गरेवापतको ज्याला आप्mनै खाता मार्फत भुक्तानी पाईने र विचौलियाहरुले ठगी गर्न नपाउने भएकाले परियोनाको पद्धती साह्रै चित्त बुभ्mदो भएको र अन्य ग्रामिण आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले पनि यो पद्धती अबलम्बन गर्नुपर्ने स्थानीय अछमपुरा कामीले बताइन ।